Faa'iidooyinka toonta: waa cunno aadan ka waayi karin cuntadaada | Ragga Stylish
Ma ogtahay faaidada toonta? In kasta oo aysan ku raaxeysaneyn sumcadda ugu wanaagsan marka ay neefta noqoto, Waa cunto ay tahay in lagu daro cuntada dhadhankeeda (waa muhiim in cuntada mediterranean) iyo hantidiisa.
Waxay ku jirtaa cuntada aadanaha illaa kumanaan sano, faa'iidooyinka toonta looma ogaanin labada Griig iyo Rome, halkaas oo toonta loo adeegsaday daaweyn xaalado badan oo kala duwan. Aan aragno sababta loogu tixgelinayo mid ka mid ah cuntooyinka ugu caafimaadka badan.
1 Sababaha loo cuno toonta
1.1 Toonta miyuu la dagaallamaa fayraska?
1.2 Hargab baad qabtaa?
2 Sida loola dagaalamo urta xun ee toonta
Sababaha loo cuno toonta
Qof kastaa wuu ogyahay in vampires ay neceb yihiin, laakiin marka laga reebo iska horimaadyada male-awaalka ah ee ay la socdaan xayawaanada habeenka, waxaa jira sababo kale oo badan oo loogu daro dhawr madax oo toon ah gaadhiga wax iibsiga. Waana in toonta ay leedahay sumcad weyn markay tahay caafimaadka. Cunista toonta way fiican tahay maxaa yeelay waxay ka hortagtaa cudur.
Toonta maxaa laga sameeyaa? Garlic, iyo waxyaabo kale, wuxuu ku siinayaa allicin, arginine, flavonoids, vitamin C iyo selenium. Kuwani waa iskudhafyo u wada hawlgala si wada jir ah iyo si gooni ah jidhkaaga si ay gacan uga geystaan ​​waxqabadka saxda ah ee tiro badan oo ka mid ah aagagga. Laakiin Sidee ayay faa'iido kuu yeelan kartaa isticmaalka joogtada ah ee toontu?
Toontu waxay leedahay waxyaabo bakteeriyada ka mid ah oo xiiso leh
Waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo cadaadiska dhiigga isagoo gacan ka geysanaya sidii halbowlayaasha u noqdaan kuwo jilicsan oo hagaajiya socodka dhiigga
Heerarka kolestaroolka ayaa hoos u dhici kara
Waxay hoos u dhigi kartaa heerarka sonkorta dhiigga, taasoo ka dhigaysa mid xiiso gaar ah u leh dadka qaba macaanka
Waxay ka hortagtaa xinjirowga dhiigga iyo astaamaha xididdada dhiigga
Marka loo eego mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu caansan ee toontu leedahay ayaa ah yareynta halista istaroogga iyo cudurrada wadnaha. Aad ayey ugu wanaagsantahay caafimaadka inbadan ayaa u maleeya inay leedahay cunto iyo daawo labadaba. Dabcan, taasi waa buun buunin, maxaa yeelay, marka lagu daro, cuntada waa inaysan waligeed bedelin daaweynta caafimaadka, laakiin waxay ku siinaysaa adiga fikrad ah tirada badan ee faa'iidooyinka ay daraasaduhu u leeyihiin cunnadan.
Intaas waxaa sii dheer, waa cunno adag oo aan si fudud ku kharribin. Haddii aad ku hayso meel qabow, mugdi ah oo hawo wanaagsan leh, waxay socon kartaa dhowr bilood. Si kastaba ha noqotee, Waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaashid sida ugu macquulsan uguna macquulsan si aad uga faa'iideysato nafaqooyinkeeda, iyo sidoo kale dhadhankeeda..
Toonta miyuu la dagaallamaa fayraska?
Toonta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagula dagaallamo fayrasyada, sida hargabka iyo ifiladaLaakiin faa'iidooyinkaas toonta ah waxay u baahan yihiin cilmi baaris dheeraad ah. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda faa'iidooyinkeeda loo maleynayo la dagaallanka Alzheimers, yareynta halista kansarka ama xoojinta nidaamka difaaca jirka. Qaar ka mid ah cudurradan ayaa ah kuwo aad u daran, rajada beenta ahna waa inaan la abuurin illaa baaritaannada ay shaki uga baxaan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, ma ahan fikrad xun in lagu daro cuntada haddiiba ay dhacdo in wax waliba ay run noqdaan.
Hargab baad qabtaa?
Fiiri maqaalka: Daaweynta qabow. Halkaas waxaad ka heli doontaa fursado badan oo lagu yareeyo calaamadaha lagunaugu soo noqdo awood buuxda sida ugu dhaqsaha badan.
Sida loola dagaalamo urta xun ee toonta
Toontu waxay ka kooban tahay qaybo yaryar oo taxane ah oo loo yaqaan 'cloves'. Astaamaha ugu caansan ee la yaqaan waa ur iyo dhadhan daran, oo ay keeneen walax dufan leh oo la sii daayo markii la jajabiyo, oo loo yaqaan allicin. Maaddaama aad fursad u heshay inaad xaqiijiso dhowr jeer, urta toonta ayaa u eg inay ku sii dheeraato afka inta la doonayo..
Nasiib wanaagse, waa wax aad u fudud in lala dagaallamo neefta xun ee toonta ka timaadda, sidaa darteed cillad darradaani waa inaysan caqabad ku noqon ku raaxeysiga faa'iidooyinka caafimaad ee cajiibka ah ee khudraddan. Mid ka mid ah xalka ugu caansan uguna waxtarka badan toonta iyo neefta guud ahaanba waa calalinta caleemaha reexaanta. Iyo haddii aadan gacanta ku hayn reexaanta cusub, ha ka welwelin, iska hubi raac cuntadaada hodanka ku ah toonta xoogaa saladh ah ama cun tufaax macmacaan.
Sida muuqata, ku raaxeysiga dhammaan faa'iidooyinka toonta, gaar ahaan kuwa la xiriira dhiigga, waxaa muhiim ah in la shiido oo loo cuno sida ugu macquulsan ceeriin. Isku xoqidda sidoo kale waa xeelad sahlaysa in diirka la saaro, markaa waxay u muuqataa sida ugu wanaagsan ee lagu daaweeyo ka hor inta aanad ku isticmaalin suxuuntaada.
Maxaa ku dhacaya faa'iidooyinkiisa haddii la kariyo ama la kariyo? Hadday tahay muddo gaaban, faa iidooyinka uu u leeyahay dhiigga lama dhimayo, laakiin markay daqiiqaduhu socdaan, way adkaanaysaa in la ilaaliyo halabuurkaaga, marka waa in lagu xisaabtamo. Sidan oo kale, sida ugufiican ee loo cuno waa la jajabin karaa oo ceyriin… iyo faa iidada ugu yar. Markay tahay kuleylka la marsado, waxay kuxirantahay cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Faa'iidooyinka toonta